Shaabiyaan gochaasaarra akka deebi’u tarkaanfin deebii isa barsiisu irratti fudhatameera jedhan obbo });
Finfinnee, Waxabajjii 7,2008(FBC) –Tibbana raayyan Ityoophiyaa tarkaanfii deebii Eertiraa irratti fudhateen, badii Shaabiyaan raawwatuuf tasgabbaa’ee akka itti yaadu kan isa taasisu akka ta’e itti gaafatamaan Waajjira Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa obbo Getaachoo Raddaa ibsan.
Dhuma torbee darberra tarkaanfii raayyaa Eertiraarratti fudhatamerratti ministirichi ibsa laataniiru.
Tarkaanfii fudhatame kanaanis mootummaan Eertiraa adabatee akka taa’u fi dubbii barbaacha isaa akka dhaabu kan taasisu akka ta’es obbo Getaachon himaniiru.
Ibsichaanis akka jedhanitti mootummaan Eertiraa hidhattooota gara Ityoophiyaatti erguun biyyattii jeequu waan barbaadus, tarkaanfin irratti fudhatames gochaa isaa kan aakka dhaabu kan taasisu jedhan.
Tarkaanfii deebii kanaanis bu’aan barbaadame argamuu himanii, rakkoo kanaan booda uumamuuf mootummaan Eertiraa itti gaafatama qabas jedhaniiru.
Kanaan booda mootummaan Eertiraa dubbii barbaacha isaa ittan fufa jennaan mootummaan Ityoophiyaa tarkaanfii walgitaa fudhachuu akka itti fufu ibsaniiru obbo Getaachon.
Biyyoonni lameen carraan waraana guututti galuu isaanii hangami jedhamee kan gaafatameef, dhimmichi mootummaa Eertiraa fi gochaa isaarratti hundaa’a jedhaniiru. Rakkoo isarra ga'erraa kan ka'e garuu Shaabiyaan carraa lolatti seenuu hin qabu jedhaniiru.
Raayyan Ityoophiyaa yeroo ammaa kanatti hojiisaa idilee, nagaa kabachiisuurrratti argamas jedhan obbo Getaachon.
Somaaliyaatti wiirtuu raayyaa Ityoophiyaa qabachuuf Alshabaab yaalii taasisus, raayyan Ityoophiyaa nagaa kabachiisurratti muuxannoo biyyoota kaanittis argaterraa ka'ee akkamiin qolachuu akka danda'uu fi amma dhumaattis ari'ee akka barbadeessuus muul'iseera jedhan.